Toerana fampakaram-bady ao amin'ny Lake Travis any Austin
Etazonia Texas Austin
Toerana fampakaram-bady ao amin'ny Lake Travis
Toerana mampiavaka ny fampakaram-bady amin'ny fomba fijery
Toerana fampakaram-bady any amin'ny havoana manodidina ny Farihin'i Travis no manolotra fanovana lehibe ho an'ny andro lehibe. Ankehitriny rehefa tapitra ny haintany mandritra ny taona maro, ny farihy Lake Travis dia maitso, maitso ary mihetsiketsika amin'ny zava-poana vaovao. Ny fivoaran'ny toekarena ao amin'ny faritra dia nanome mari-pananana maro fampakaram-bady ny fahatokisany ny vola amin'ny fanavaozana lehibe.
Trano famolavolana maromaro maromaro, Villa Antonia dia miorina eo amin'ny havoana maitso manakaiky ny morontsiraka avaratr'i Lake Travis.
Miaraka amin'ny arofanina vato, tetezana mahavariana, trano maitso sy ravina, ny toeram-panorenana Tuscan dia nofinofin'ny mpaka sary. Miaraka amin'ny efa ho 20.000 metatra toradroa, ity toerana ity dia manolotra toerana marobe an-tokotany sy ivelan'ny toerana azo anaovana ny lanonana sy ny fandraisana. 19039 Adrian Way, (512) 267-3509
Te hanao lanonana fampakaram-bady mamirapiratra miaraka amin'ny hatsaran-tarehy mahafinaritra? Eritrereto ny fankalazana ny Vintage Villas, toerana fampakaram-bady sy trano fandraisam-bahiny mitazana ny Lake Travis. Raha tianao ny trano fatoriana iray misy varavarankely misy varavarankely iray mitazana ny farihy na ravin-kazo eny amoron-drano, dia afaka manampy anao hametraka lanonana mahafinaritra sy fandraisana ny mpiasa. Ideal ho an'ny fampakaram-bady mariazy, Vintage Villas dia manana efitrano 44 ho an'ireo vahiny mandalo. 4209 Eck Lane; (800) 267-7623
3. Natures Point
Miaraka amin'ny vadinao ve ianao sy ny vadinao? Avy eo ny Natures Point angamba no toerana mety hamehezana ny knot. Any amin'ny saikinosy ao amin'ny Farihin'i Travis no misy ny toerana misy ny lalan-jazakely, ny zaridaina mitahiry tsara, ny sarivongana, ny loharano ary ny mahazatra, ny trano fandroana ivy.
Maro koa ny efitra fisakafoanana / trano fisakafoanana ivelan'ny trano no manana fisainan'ny ranomasina. Fotoana iray monja no nomanina isan'andro tao amin'ilay trano, noho izany dia afaka matoky ianao fa handray ny sainao manontolo amin'ny andro mariazinao. 18206 Lakeshore Point Boulevard, Lago Vista; (512) 963-5003
4. Hacienda del Lago
Eo anelanelan'ny 10 hektara misy havoana miankina amin'ny tany sy havoana, ny Hacienda del Lago dia miorina eo an-tampon'ny havoana iray mitazana ny Lake Travis.
Feno fankalazana ny fetibe, ary misy trano goavam-be iray ho an'ny fandraisana. Ireo mpivady koa dia afaka mijanona mandritra ny alina ao amin'ny trano lehibe eo an-toerana. Hacienda del Lago dia manome teboka Bonus ao amin'ny bokiko noho ny fananana iray amin'ireo lahatsary mamy indrindra sy malaza indrindra hitako hatramin'izay. Asio tavy eo alohan'ny hijeranao azy. 14000 FM 2769, Volana; (512) 496-0099
Ho an'ny fampakaram-bady mahavariana, mihoatra ny loha-dàlana, dia sarotra ny manandratra ny fananana izay hita any Lakeway Resort sy Spa. Manolotra fahitana mahavariana momba ny Farihin'i Travis, ilay toeram-pitsangatsanganana dia manana toerana maro ho an'ny lanonana sy ny fandraisana izay manararaotra tanteraka ny tontolo mahafinaritra. Ny gala Vistas Glass dia tena mitovy amin'ny azy - efitrano lehibe iray misy rindrina mavo rehetra manerana ny farihy. Ny serivisy fitaterana dia misy maimaimpoana maherin'ny 350. Ambonin'izany, ny mpivady dia mahazo efitrano malalaka amin'ny alàlan'ny fampakaram-bady. Fombafomba kely no azo atao any ivelan'ny toeram-pambolena eo ambany aloky ny hazo oaka 100 taona. 101 Lakeway Drive; (512) 261-7314
Toerana tsara indrindra fitsidihana any Central Texas
Top Movie Theaters any Austin
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny seranam-piaramanidin'i Austin
Toerana mahavariana ny vorona any Austin
Fetin'ny mpifankatia any Austin
Ny 15 Best Destination Break Spring tany Texas
Fiteny etikety amin'ny teny Rosiana
Valo ny karazan-java-manilikilika any Afrika
Ny fitsangantsanganana fitsangatsanganana an'i Cleveland III
Mpitarika voatendry any Montréal
Ny Nosy Oseana Indiana any Inde: Ny Torolalana Manonona
Miala ao Huntsville, any Alabama, amin'ny Andro Krismasy
Ny Apps New York City ho an'ny mponina sy vahiny
Tranombakoka Amerikanina momba ny tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pirenena
Sary Fotsy Fotsy: Jereo ny sary anatiny sy ivelany
2015 Nepal Horohorontany
Manao alika any Norvezy: fitsipika sy fitsipika
Park Carolina National Park any South Carolina